Nooca: Deynta Tooska ah ama Sinnaanta, Maalgashiga Saameynta Sare leh
Mawduuca: Gaadiidka Nadiif ah, Farsamada
Gaadiidka, gaar ahaan socdaalka maalinlaha ah, wuxuu soo saaraa ku dhawaad 30 boqolkiiba qiiqa gaaska cagaaran ee Maraykanka. Scoop waxay doonaysaa inay carqaladeyso socdaalka dheer, keligeed iyadoo siineysa shaqaalaha caadooyinka, fursadaha baabuurta la rogrogo.
$2.5 milyan oo maalgashi toos ah; asalkiisu yahay 2019.
App-ka Scoop waxa uu beddelaa baabuur-wadista-cajiibka ah isaga oo isku xidha wadayaasha iyo wadayaasha maalin kasta isla goobta shaqada. McKnight waxaa soo jiitay awoodda Scoop si ay u siiso gaadiid la wadaago oo jaban oo loogu talagalay shaqaalaha halkaasoo ikhtiyaarrada gaadiidka dadweynuhu ay liitaan. s. Scoop, raacayaashu waxay ku badbaadiyaan lacag lahaanshaha baabuurka halka darawaladu ay kasbadaan dakhli dheeraad ah - qof kastana wuu ku guulaysta gelitaanka wadooyinka baabuurta. Waxaan sidoo kale qiyaasaynaa in Scoop ay leedahay awood ay ku bixiso faa'iidooyinka sinnaanta iyadoo la dhisayo bulshada iyo xallinta "caqabadda-mayl-dambe" ee socdaalka, halkaas oo qaybta ugu gaaban ee safarka ay ku baxdo lacagta ugu badan. Scoop sidoo kale waxay ka abuurtaa faa'iidooyinka deegaanka ee baabuurta yar ee wadada. Hal cillad, si kastaba ha ahaatee, waa in ay la tartami karto gaadiidka dadweynaha.
Miskiin Kani waa ganacsiga kaliya ee ku jira faylalka faylalka ee McKnight kaas oo si weyn u saameeyay masiibada iyo kaqaybgalayaasheeda isbeddelada safarka, hantida maguurtada ah ee ganacsiga iyo dhaqanka ku saleysan xafiiska. Shirkaddu waxay u beddeshay kharashkeeda iyo xeeladaheeda si waafaqsan.
Istaraatiijiyadeenna, si aan u wajahno maalgashiga saameynta leh oo leh dabacsanaan si loola qabsado isbeddelka bulshada iyo deegaanka, ayaa la xaqiijiyay mid waxtar leh guud ahaan. Si kastaba ha ahaatee, mustaqbalka qoraalkayaga shirkado gaar ah waa in ay ku jiraan faham aad u ballaadhan oo male-awaal ah oo ku saabsan suurtagalnimada carqaladaynta dhaqaale ee heer caalami. Waxaan sii wadi doonaa inaan cabbirno saameynta, annaga oo aqoonsanay in maalgashigani uu u shaqeyn doono si ka duwan sidii aan markii hore fileynay.